Tselatra · Janoary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Janoary, 2009
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Janoary, 2009
Ny mpamaham-bolongana Pierre Maury no mahatsiaro ny faritra atsimo andrefan'i Madagasikara rehefa niditra an-tanety ny rivodoza Fanele tokony androany tamin'ny 4:17 marainan'ny 21 Janoary 2009 (fr). Ahiana hisedra ny setrasetran-drivotra mahatratra 281 km/h ny tanànan'i Belo-sur-Mer.
21 Janoary 2009
Taorian'ny fahavakisana fonja misesisesy nanerana an'i Madagasikara tamin'ny herinandro, dia notaterin'i Jentilisa fa may ny fonja hafa any Toamasina ( morontsiraka atsinanan'i Madagasikara) omaly ( 13 Janoary) [mg]. Nitatitra ny fisian'ny setroka mitakovona sy ny feom-basy 5 ny nanatrimaso. Mbola hofantarina moa ny anton'ny setroka sy ny feom-basy.
Mpamaham-bolongana Malagasy roa no nitantara an-tsary sy nitantara ny fizotran'ny fihaonam-be politika teto Antananarivo rehefa mihahenjana ny tady eo amin'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo Andry Rajoelina sy ny filoha Marc Ravalomanana mitondra amin'izao fotoana izao noho ny fanakatonana tobim-pahitalavitra an-toerana iray (mg). Avylavitra namoaka ny sary manontolon'ny fihaonana ary Jentilisa kosa nitantara tamin-kitsim-po ny fizotran'izany (mg).
Nakaton'ny fitondrana iraniana ny gazetin'ny fanavaozana, Kargozaran. Bolongana sy vohikala vaovao maro no nitatitra fa lasa lasibatra noho ny krizy any Gaza ny Kargozaran. Navoakan'ny Kargozarn manko ny fanambarana nataon'ny fikambanan'ny mpianatra (Tahkim Vahdat) izay “manameloka an'isiraely sy ny vondrona mpampihorohoro miafina sy mialokaloka any an-tsekoly sy hopitaly any (Gaza)”.
01 Janoary 2009